FFKM : Tomponandraikitra feno -
AccueilRaharaham-pirenenaFFKM : Tomponandraikitra feno
29/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Paradisa sosialista”, “ento miakatra ity firenena ity”, “minoa fotsiny ihany”, “fanovàna”, sns. Efa nahita baikom-pitolomana politika (slogans démagogiques) karazany maro vahoaka Malagasy. Nianjera ny amiraly Didier Ratsiraka ny taona 1991, niakatra teo amin’ny fitondrana ny profesora Zafy Albert. Naato tamin’ny maha filoha azy indray ny profesora Zafy Albert dia naverina teo amin’ny fitondrana ny amiraly Didier Ratsiraka. Nianjera fanindroany ny amiraly dia nakarina teo amin’ny fitondrana i Marc Ravalomanana. Nianjera indray koa ity farany dia nalain’i Andry Rajoelina ny fahefana.
Teo foana anefa ny FFKM nandritra ireo vanim-potoana ireo ary nandray anjara mivantana mihitsy raha tsy hiresaka afatsy ny “convention du 31 Octobre”. Fa tsy nitsahatra nitontongana ny fari-piainan’ny vahoaka Malagasy. Tsy afaka handà mihitsy ny FFKM fa tsy tomponandraikitra feno tamin’ireo krizy nifanesy teto amin’ny firenena ireo ary izany indrindra aza no nahatonga ireo Fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao politika nitsipaka ny fampihavanana nokasain’ny FFKM nandritra ny Tetezamita.
Tafavoaka tanatin’ny krizy ihany i Madagasikara ny taona 2014, tafaverina tao anatin’ny roa taona monja ny fitokisan’ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena, foana ireo sazy sy an-kivy ara-toekarena. Mbola marefo anefa ny fiainam-pirenena noho ireo krizy nifanesy izay nandrava hatrany ifotony ny ara-toekarena, ny ara-toe-tsaina, ny ara-pitantanana. Izany hoe, tsy manana zo hiditra anaty krizy vaovao ny firenena raha tsy izany ho latsaka anaty lavaka lalina ary nanamafy ny maha zava-dehibe izany fitoniana ara-politika izany ny Banky Iraisam-pirenena raha tsy izany zava-poana ireo ezaka vita nandritra izay roa taona nanarenana ny fiainam-pirenena izay.
Toa mifanohitra amin’izany anefa ny fihetsiky ny FFKM. Tsy mitondra ny firenena ho an’ny fitoniana velively ny fanambarana nataon’izy ireo farany teo. Velom-panontaniana noho izany ny mpanara-baovao manao hoe: “Voafehin’ireto mpitondra Fivavahana ireto ve ny mety ho vokatr’iny fanambarana nataon’izy ireo farany teo iny? Azon’ny FFKM an-tsaina ve fa mbola marefo ny rafi-piaraha-monina eto amintsika amin’ny ankapobeny vokatr’ireny krizy politika namoizana ain’olona an-jatony ireny?
Fehiny, tomponandraikitra feno amin’izao fahavoazana mahazo ny firenena izao ny FFKM ary mbola tomponandraikitra ihany koa raha sanatria ka rendrika ao anatin’ny fifandonana sy krizy vaovao indray ny firenena. Mila fitoniana indrindra ny ara-politika ny fanarenana ny firenena fa tsy amin’ny alalan’ny fanambarana miendrika fihatsiana fikomiana tahaka ireny farany teo ireny.